ICofttek Scholarship -Izixhobo zeCofttek.
Wonke umntu ufuna umsebenzi obalaseleyo kunye nemfundo eya kubanceda ukuba bahambe kude. Nangona kunjalo, abantu abaninzi kufuneka bancame umsebenzi wabo kunye neenjongo zemfundo unyaka nonyaka. ICofttek iyazi ukuba ibaluleke kangakanani imfundo efanelekileyo, yiyo loo nto sinceda ukufundisa abafundi bethu malunga nokutya ukutya kunye novavanyo kunye neengcebiso.
Isoftware yethu yaseCofttek kukwazisa okutsha esinebhongo lokuba sikwazi ukubhengeza. Yimali eyi- $ 2000 yokufunda eyenzelwe ukunceda abafundi bafezekise amaphupha abo emfundo nawomsebenzi. Esi sibonelelo sokufunda siya kunikwa umfundi omnye ngonyaka ukuze akwazi ukuhlawula iindleko zemfundo. Sijonge ukuliphinda kabini inani lemali yokufunda kunyaka olandelayo.
Esi sibonelelo sokufunda siya kubonelela ngomfundi $2000 ukuhlawulela iindleko zeemfundo. Sisifundo nje kuphela esisifundisiweyo kwaye asiphinde sisebenze kwakhona. Iya kuthunyelwa kwi-ofisi yezezimali.
Sikhangela umfundi onokuyisebenzisa ngokwenyani imali esibonelela ngayo. Abafundi abaphumelele izidanga kunye nabapasa isidanga bangafaka izicelo, ukuba nje babhaliswa ngokusisigxina kwisikolo esiphumeleleyo okanye kwikholeji eyaziwayo. Ubuncinci be-GPA (i-avareji yeBanga lePhuzu) ukufaka isicelo sobuchule yi-3.0
Ungasifaka njani isicelo
Unokufaka isicelo ngokulula kubufundi. Yenzelwe ukuba ibe lula ukuba ilungele kwaye ifake isicelo. Linani elilinganiselweyo labafundi eliza kufaka isicelo, kwaye ngumfundi omnye kuphela onokuthi aphumelele.
Nantsi indlela oyisebenzisa ngayo:
Qala ngokubhala isincoko samagama angama-500 okanye ngaphezulu malunga "Ukutya okongezelelekileyo ekusebenziseni ukutya okuthandwa kakhulu kunangaphambili". Ungaphinde ujonge enye yezifundo ozigqibileyo kwaye usebenzise ezo zinkcukacha ukuba ziya kukunceda njani ukuphucula ubuchule bakho. Isincoko siya kufuneka singeniswe Disemba 31st, 2020.
Uya kudinga ukuthumela isicelo sakho kuyo [imeyile ikhuselwe] qinisekisa ukuba ikwifomati yegama likaMicrosoft. Sebenzisa idilesi ye-imeyile yakho yemfundo (ye-edu) kuphela. Ukuba ungenisa isicelo kwiPDF okanye kwiGoogle, ayizokwamkelwa.
Ifomu yokungenisa kufuneka ibandakanye le ngcaciso ilandelayo: igama lakho, inombolo yefowuni, igama leyunivesithi kunye nedilesi ye-imeyile.
Isincoko masibhalwe ngawakho amazwi kwaye simele ukuba sixabiseke kumfundi.
Nakuphi na ukugqwetha kuya kubangela ukuba ungeniso lwakho luqale kwangoko.
Nikezela kuphela ngolwazi oluchaziweyo apha ngasentla.
Isincoko sakho siya kugwetywa ngokwenziwa kwayo, ingcinga kunye nexabiso laso.
Ungeniso ngalunye lujongwa ngesandla kwaye nge-15 kaJanuwari, ngo-2021, ophumeleleyo uya kwaziswa kwaye aziswe nge-imeyile.
Umgaqo-nkqubo wethu wabucala
Senza isiqinisekiso sokuba akukho lwazi lomntu buqu kwabelwana ngalo, kwaye lonke ulwazi lobuqu lugcinelwe ukusetyenziswa kwangaphakathi kuphela. Asiboneleli zinkcukacha zabafundi kubantu besithathu nangasiphi na isizathu, kodwa sinelungelo lokusebenzisa amanqaku angeniswe kuthi nangayiphi na indlela esinqwenela ngayo. Ukuba ungenisa inqaku eCofttek, usinika onke amalungelo kumxholo, kubandakanya ubunini besiqulatho. Kuyinyani nokuba ukuhanjiswa kwakho kwamkelwe njengophumeleleyo okanye hayi. ICofttek.com inelungelo lokusebenzisa wonke umsebenzi ongenisiweyo ukuze ipapashwe njengoko ibona kufanelekile kwaye apho ibonwa ifanelekile.